AFT: hosantarin’i Clipse Teean ny fampirantiana | NewsMada
AFT: hosantarin’i Clipse Teean ny fampirantiana
Mitombo tsikelikely ireo hetsika kolontsaina sy momba ny zavakanto, etsy amin’ny Alliance française (AFT) Andavamamba, amin’izao fiandohan’ny taona izao. Raha ry Quatuor Squad no hisantatra ny sehatra ho an’ny mozika, hanokatra ny varavaran’ny trano fampirantiana, ao amin’ity foibe ity, kosa i Clipse Teean.
“Demain n’est pas loin”, izay azo adika koa hoe “Tsy ho ela ny ampitso”, ny lohatenin’ny hetsika hotanterahiny eny, ny 6 hatramin’ny 22 febroary izao. Ho maro karazana ny kanto handravaka ny efitra fampirantiana, miaraka amin’ity tovovavy ity. Marobe, toy izany, koa mantsy ireo karazan-javakanto voafehiny.
Raha fintinina, ao anatin’ny tanan’i Clipse no misy ilay talenta tsy manam-paharoa: fanaovana “graffiti”, izay marihina fa izy irery ihany aloha ny vehivavy malagasy mahafehy sy malaza amin’izany, hatreto. Mahay manao sokitra sy mikirakira ary manambatambatra vy ihany koa izy. Ambonin’izany ny fahaizany mampihaingo, amin’ny alalan’ny akora samihafa, karazan-javatra maro.
Marobe ny lalana efa nodiaviny sy ny traikefa eo an-tanan’i Clipse Teean na mbola ao anatin’ny fahatanorana tanteraka aza izy. Tsy mahagaga raha mpikambana amina sehatra samihafa, toy ny Labe Kolontsaina Mainty, ny International Business Music of Chambers ary ny Jamerla Koonaction izy.
Ankoatra ity fampirantiana lehibe, satria ny sanganasany irery no hita ao amin’ny AFT, ity, mandray anjara amin’ny “La nuit des idées”, any amin’ny Alliance française any Antsirabe, ihany koa izy, hatramin’ny 1 febroary izao.